အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၁ သန်းကျော်ရှိလာကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် နိုင်ငံသား ၁ သန်း အတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအဖြစ် ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ Washington Monument ၌ အမေရိကန်အလံအား တိုင်ဝက်ချလွှင့်ထူထားသည်ကို မေ ၁၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးယောက် ၊ မေ ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် နိုဘယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ မေ ၁၇ ရက်တွင် ဆိုးရွားသောသမိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ် ၁ သန်းထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်မှ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း Eastern Daylight အချိန် ည ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၁၆၂၀) အထိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက် ၈၂ ဒသမ ၆ သန်း နှင့်အတူ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၁,၀၀၀,၀၀၄ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း စာရင်းများအရ သိရသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၉၀,၈၆၆ ဦးနှင့်အတူ ထိပ်ဆုံးတွင် ရပ်တည်နေသည်။ တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်သည် COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၈၈,၂၅၄ ဦးနှင့်အတူ ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်ပြီး ထိုနောက်တွင် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က သေဆုံးသူ ၇၄,၂၃၉ ဦး နှင့် နယူးယောက်ပြည်နယ်က သေဆုံးသူ ၆၈,၆၈၃ ဦး အသီးသီးရှိကြောင်း အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၃၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ပြည်နယ်များတွင် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ၊ အိုဟိုင်းအိုး ၊ ဂျော်ဂျီယာ ၊ မီချီဂန် ၊ နယူးဂျာစီ နှင့် အရီဇိုးနား ပြည်နယ်များ ပါဝင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှု နှင့် သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြင့် ကပ်ရောဂါရိုက်ခတ်မှုဒဏ် အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နှင့် သေဆုံးမှု၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ သန်းတစ်ဝက် ရှိခဲ့ရာမှ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ၆ သိန်း ၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်တွင် ၇ သိန်း နှင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင် ၈ သိန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၉ သိန်းအထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် ၅ သိန်းမှ ၆ သိန်းသို့ ခုန်တက်ရန် ၁၁၃ ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ၆ သိန်းမှ ၇ သိန်းသို့ ခုန်တက်ရန် ၁၀၈ ရက် ကြာမြင့်ကာ ၇ သိန်းမှ ၈ သိန်းသို့ ခုန်တက်ရန် ၇၄ ရက် သာကြာမြင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၈ သိန်းမှ ၉ သိန်းအထိ ခုန်တက်ရန် ၅၂ ရက် ကြာမြင့်ပြီး ၉ သိန်းမှ ၁ သန်းအထိ ခုန်တက်ရန် ၁၀၂ ရက် ကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
It took 113 days for the national death toll to climb from 500,000 to 600,000, 108 days to jump from 600,000 to 700,000, 74 days to soar from 700,000 to 800,000, 52 days to surge from 800,000 to 900,000 and 102 days to increase from 900,000 to 1 million. ■
Photo – U.S. national flags fly at half-staff at the Washington Monument to mourn 1 million American lives lost to COVID-19, Washington, D.C., the United States, May 12, 2022. (Xinhua/Liu Jie)